8 atụmatụ na-gị gam akporo ekwentị mma si cyber egwu | Gam akporosis
8 atụmatụ na-gị gam akporo ekwentị mma si cyber egwu
Miguel Gaton | | Nche
You maara ihe niile data na ozi nzuzo nke ị chekwara na ekwentị gị? Foto, vidiyo, akụkọ ntolite ịntanetị gị, ozi, na ọbụna okwuntughe nzuzo! Ekwentị gị bụ ihe dị oke ọnụ ahịa maka ndị ohi na ndị na-egwu ohi. Ma echegbula! Ọ dabara nke ọma, e nwere ụfọdụ ihe ị ga - eme iji chebe data gị iyi egwu cyber. Rịba ama n'ihi na n'okpuru m ga-enye gị ndụmọdụ 8 bara uru iji debe ekwentị gam akporo gị. Jikere? Ka anyị gaa ebe ahụ!
1 1. Debe okwuntughe siri ike
2 2. Jiri VPN
3 3. Debe sistemụ mkpanaka gị emelitere
4 4. Kpachara anya maka ibudata ngwa
5 5. Nyochaa ikikere ị nyere ngwa
6 6. Wụnye antivirus na mkpanaka gị
7 7. Encrypt ekwentị mkpanaaka gị
8 8. Jiri naanị Google Play dị ka ụlọ ahịa ebudatara
1. Debe okwuntughe siri ike
Ọ bụ na ị gaghị emeghe ọnụ ụzọ ụlọ gị ghere oghe ka onye ọ bụla wee banye? Nke ahụ bụ kpọmkwem ihe ị ga - eji ekwentị gị rụọ ma ọ bụrụ na ị tọọ ike paswọọdụ. Ndụmọdụ m nke mbụ bụ itinye nchekwa nchekwa mbụ na ekwentị gam akporo gị site na ịtọ PIN ma ọ bụ paswọọdụ kama ịgbanye usoro ihe eji eme ihe, nke dị mfe ịgbawa.
2. Jiri VPN
una Okwey maka gam akporo ọ nwere ike igbochi ndị na-agba ọsọ na mwakpo ransomware. Okwey kpuchido nzuzo gị n’etinye ọwara n’etiti ekwentị gị na Internetntanetị. N'ụzọ dị otú a, ọrụ ọ bụla ị na-eme n'ihu ọha ma ọ bụ na-emeghe Wi-Fi site na ekwentị gị ga-echebe.
3. Debe sistemụ mkpanaka gị emelitere
Mmelite na-ejikwa atụmatụ ọhụrụ maka ekwentị gị, mana yana ya mmezi nchebe dị mkpa. Nke a bụ ihe kpatara na ịnweghị ike ịhapụ ekwentị gị ka ọ bụrụ ụbọchị ochie.
4. Kpachara anya maka ibudata ngwa
Ndụmọdụ ọzọ bụ ịkwụ ụgwọ attentionaa ntị na ngwa ị rụnyere na ekwentị gị. Nke ahụ bụ ebe ọtụtụ n'ime malware nke ahụ na-emetụta ekwentị. Ya mere, ana m akwado ihe 3:
Wụnye naanị ngwa ị chọrọ n'ezie
Ọ maara banyere ikikere Kedu ihe ị na-enye mgbe ị wụnye ngwa na ekwentị gị?
Wụnye ngwa naanị site na Google Play, ụlọ ọrụ gọọmentị ngwa ngwa maka gam akporo.
5. Nyochaa ikikere ị nyere ngwa
Ekwuola m isiokwu a na mbụ, mana echere m na ọ dị oke mkpa na achọrọ m inye ya naanị otu isi. Mgbe ụfọdụ anyị amaghị data nzuzo anyị na-ebufe a dị ka nke ngwa dị maka eziokwu nke ịwụnye ha na ngwaọrụ anyị.
Oge ụfọdụ ngwa ndị anyị na-anaghị eji ma ọ bụ jiri naanị oge ụfọdụ nwere ike ịnweta foto na vidiyo anyị. Awaremara nke a dị mkpa. Y’oburu n’achoghi igha n’enye ndi kompeni n’onwe gi ihe omuma gi, ihe kachasi bu lelee ikikere ndị nọ n'ọrụ na ekwentị gam akporo gị maka ngwa awụnyere.
Maka nke ahụ, ị ​​ga-aga Ntọala / Ngwa ntinye akwụkwọ / ngalaba ikike ikikere. Ga-ahụ ndepụta na ngwa na ikikere ha nwere ma ị ga-enwe ike gbanwee ha.
6. Wụnye antivirus na mkpanaka gị
Enwere ụfọdụ ngwa nchekwa dịka antivirus mobile nke ahụ ga - enyere gị aka itinye nchekwa ọzọ na ekwentị mkpanaaka gị ka ọ ghara ịnwe malware na phishing. N'ezie, jide n'aka na antivirus ị na-etinye adịghị mma yana site na ụlọ ọrụ a pụrụ ịtụkwasị obi. Ngwọta ahụ agaghị adị njọ karịa ọrịa ahụ.
Enwekwara ngwa nche nke na-enye gị ohere ịnweta mkpanaka gị ma ọ bụrụ na ị na-ezu ohi ma ọ bụ ọnwụ na-azọpụta data gị na ọbụna chọta ebe ọ dị.
7. Encrypt ekwentị mkpanaaka gị
Daysbọchị ndị a ọ bụ ihe zuru ebe niile maka ekwentị ịbịa jiri atụmatụ ezoro ezo. Site na usoro ezoro ezo ihe emere gbanwee data ekwentị ka ọ bụrụ data anaghị agụ agụ nke mere na nzuzo gị na-ekwe nkwa.
Will ga-edozigharị okwuntughe ma ị ga-akpachara anya na nke a ebe ọ bụ na n'ọtụtụ ọnọdụ eziokwu nke ịbanye paswọọdụ ezighi ezi ọtụtụ oge na-ebute nhichapụ akpaka nke data niile ị nwere na ekwentị gị.
N'iburu nke a, nkwanye m bụ ka ịme ndabere.
8. Jiri naanị Google Play dị ka ụlọ ahịa ebudatara
Anyị kwurula banyere nke a na mbụ, mana okwu a dịkwa oke mkpa nke na o kwesiri ịbụ isi okwu. Ana m akwado gị budata naanị ngwa site na Google Play Ebe ọ bụ na nbudata ngwa site na amaghi ma ọ bụ na mpụga saịtị nwere ike njọ imebi ihe nche nke ngwaọrụ gị.
A na-ahụkarị ngagharị na ekwentị mkpanaaka nke na-eme ka ha nwee ike ịwakpo ha, ya mere, ọ dị mkpa ịmara ozi ọma ma debe ekwentị gị dịka o kwere mee.
Kedu ka ị mere emesi nche nke mkpanaaka gị? You na-eji nke ọ bụla n'ime nhọrọ ndị gara aga?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Nche » 8 atụmatụ na-gị gam akporo ekwentị mma si cyber egwu
MMORPG Ọchịchịrị na Ìhè na-abịa na ekwentị mkpanaaka, ndebanye aha tupu emeghe
Etu esi wụnye MIUI 12 akara njikwa na ekwentị ndị ọzọ na-abụghị Xiaomi